२०१ Brand मा तपाइँको ब्रान्डको लागि कसरी दृश्य स्टोरीटेलिंग प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने Martech Zone
जबकि बज शब्द दृश्य कथा कथन नयाँ हुन सक्छ, दृश्य मार्केटिंग को विचार होईन। सामान्य जनसंख्याको% 65% भिजुअल सिक्नेहरू हुन्, र यो कुनै गोप्य कुरा होइन कि छविहरू, ग्राफिक्स र फोटोहरू सामाजिक नेटवर्कहरू बीचमा सबैभन्दा धेरै मनपराइएको सामग्री हुन्।
बजारलाई अवधारणाको विकास गरी सम्मान गरेर एक कदम अगाडि भिजुअल मार्केटिंगमा लगिन्छ दृश्य कथा कथन जहाँ हामी कथा भन्न इमेजरी प्रयोग गर्दैछौं।
दृश्य कथा कथनले किन काम गर्दछ?
विज्ञान हामीलाई भन्छ कि हाम्रो noggins चित्रहरु प्रेम गर्न तार गरीएको छ। हाम्रो मस्तिष्कको लगभग आधा दृश्य प्रोसेसिंगमा संलग्न छ, एक सेकेन्डको १ / १० औं भन्दा कममा दृश्यहरूको व्याख्या गर्ने।
तपाईलाई थाहा छ हाम्रो दिमागले के माया गर्छ? कथाहरू हामी यसलाई सहयोग गर्न सक्दैनौं। हामी एक कथा मा जानकारी व्यवस्थित गर्न बाध्य छौं।
यो इन्फोग्राफिक, द्वारा उत्पादित डिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी विडेन, केहि महान तथ्या .्क र दृश्य कथा कथाहरू वरपरका सुझावहरू प्रदान गर्दछ र कसरी तपाईं यसलाई आफ्नो व्यवसायको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ इन्फोग्राफिकबाट केहि हाइलाइटहरू छन्
छविहरू समावेश भएका लेखहरूले बिना लेख भन्दा% 44% बढी हेराईहरू प्राप्त गर्दछ।
वास्तविक व्यक्तिको फोटोहरूमा क्लिक गर्ने प्रयोगकर्ताहरू बिक्रीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावित २००% हुन्छन्।
छविहरू फेसबुकमा सबैभन्दा आकर्षक पोस्टहरूको%%% बनाउँछन् (२०१२ मा% 93% बाट माथि)।
छविहरूसँगको ट्वीटहरूले १ 150०% थप रिट्वीट प्राप्त गर्दछ।
दृश्य तत्वहरूले मात्र ठूलो स greater्लग्नता ट्रिगर गर्दैन, तर यसले तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंको सामग्री लामो सम्झनमा मद्दत गर्दछ।
दृश्य कथा कथनको लागि १ practical व्यावहारिक सल्लाहहरू पढ्नको लागि स्क्रोल गर्नुहोस्, र तपाईंको भिजुअल कथा कथन सफलताका कथाहरू तलका टिप्पणी सेक्सनमा साझा गर्नुहोस्।
टैग: बाँधडिजिटल सम्पत्ति व्यवस्थापनकहानीदृश्य कथा कथनफराकिलो
शाखा मेट्रिक्स: रूपान्तरण, वृद्धि र ट्र्याक मोबाइल अनुप्रयोग दत्तक
यहाँ महान विचारहरु! इन्फोग्राफिक्स पढ्नको लागि धेरै जानकारीमूलक र चाखलाग्दो हुन सक्छ - तर मात्र यदि प्रभावी रूपमा प्रयोग गरियो र राम्रोसँग सिर्जना गरियो भने। मलाई लाग्छ कि यो एक उत्कृष्ट उदाहरण हो! बाडेको मा धन्यवाद।